Kuratidza zvinyorwa neelebheri kuita mari
Maitiro ekuita mari panguva yeiyo coronavirus dambudziko COVID SARS 2019-nCoV
Kana iwe uchida kuita mari nekukurumidza kana kuti zvimwe unosvika kune yakakura mari, chikwereti hachisi chaicho mhinduro. Tinokuunzira yakawanda yemamwe maitiro akajairika uye mashoma ashatisa ekuwedzera mari. Kana iwe uri kugadzirisa dambudziko "Ini ndinoda kuwana mari uye ini handizive" saka iwe uri munzvimbo chaiyo. Pane yedu saiti, isu tiri kutora zvishoma nezvishoma nzira dzakasiyana dzekuita mari online uye kubva pawebhu. Munyaya inotevera isu takagadzirira mashoma mashoma nzira dzekugadzira mari uye pasi pechinyorwa iwe unogona zvishoma nezvishoma kuwana nzira nyowani kubva kuvaverengi vedu vanogona zvakare kukubatsira.
Maitiro ekuita mari? Kuita mari nhasi kuchine imwe yezvinetso zvikuru zvinosangana nevanhu. Neraki, kune dzakawanda nzira dzekuti uwane mari. Iyo nzira yakawanda iwe yaunosanganisa, yakakura mikana yako yekubudirira.
Kuuya munguva pfupi .....